Grantcoin စျေး - အွန်လိုင်း GRT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Grantcoin (GRT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Grantcoin (GRT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Grantcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Grantcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Grantcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GrantcoinGRT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00159GrantcoinGRT သို့ ယူရိုEUR€0.00136GrantcoinGRT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00122GrantcoinGRT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00146GrantcoinGRT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0144GrantcoinGRT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0101GrantcoinGRT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0355GrantcoinGRT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00598GrantcoinGRT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00212GrantcoinGRT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00223GrantcoinGRT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0358GrantcoinGRT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0123GrantcoinGRT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00857GrantcoinGRT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.119GrantcoinGRT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.269GrantcoinGRT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00219GrantcoinGRT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00243GrantcoinGRT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0496GrantcoinGRT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0111GrantcoinGRT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.17GrantcoinGRT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.89GrantcoinGRT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.606GrantcoinGRT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.117GrantcoinGRT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.044
GrantcoinGRT သို့ BitcoinBTC0.0000001 GrantcoinGRT သို့ EthereumETH0.000004 GrantcoinGRT သို့ LitecoinLTC0.00003 GrantcoinGRT သို့ DigitalCashDASH0.00002 GrantcoinGRT သို့ MoneroXMR0.00002 GrantcoinGRT သို့ NxtNXT0.13 GrantcoinGRT သို့ Ethereum ClassicETC0.000236 GrantcoinGRT သို့ DogecoinDOGE0.476 GrantcoinGRT သို့ ZCashZEC0.00002 GrantcoinGRT သို့ BitsharesBTS0.0609 GrantcoinGRT သို့ DigiByteDGB0.0526 GrantcoinGRT သို့ RippleXRP0.00566 GrantcoinGRT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00006 GrantcoinGRT သို့ PeerCoinPPC0.00555 GrantcoinGRT သို့ CraigsCoinCRAIG0.737 GrantcoinGRT သို့ BitstakeXBS0.069 GrantcoinGRT သို့ PayCoinXPY0.0282 GrantcoinGRT သို့ ProsperCoinPRC0.203 GrantcoinGRT သို့ YbCoinYBC0.0000009 GrantcoinGRT သို့ DarkKushDANK0.519 GrantcoinGRT သို့ GiveCoinGIVE3.5 GrantcoinGRT သို့ KoboCoinKOBO0.368 GrantcoinGRT သို့ DarkTokenDT0.00147 GrantcoinGRT သို့ CETUS CoinCETI4.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 01:25:03 +0000.